Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Oo Ka Carooday Dadka Cadaaladda Udoonanaya Maxkamadaha Islaamiga Ah.
Saturday September 29, 2018 - 12:21:46 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ninka ku magacaaban guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamulka isku magacaabay HirShabelle ayaa Hanjabaad iyo caga jugleyn ujeediyay shacabka ku dhaqan gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Yuusuf Axmed Cagar Dabageed oo dhowaan loosoo magacaabay guddoomiyaha gobolka ayaa shir Jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Beled Weyne wuxuu hanjaabad ugu jeediyay tobanaan kun qof oo isbuuc walba cadaalad u doonta Maxkamadaha islaamiga ah ee ka furan galbeedka iyo Bariga Hiiraan.
Dabageel oo umuuqday in uu ka caraysanyahay ammaanka iyo cadaaladda ay soo dabaashay wilaayada islaamiga Hiiraan iyo kalsoonida shacabku ku qabo ayaa yiri "Dadka Maxkamada u aada deegaanada Al-Shabaab saddax bilood ayaa xirneynaa Shan kun oo dollar-na waa la ganaaxaya, iska aada Booco iyo Luuq jeelow,reer hebel ayaad tihiin cid idin soo qabaneyso majirtee iska aada Beledweyne ayaan ku kala baxeynaa" .
Subax walba marka uu waagu baryo bosteejooyinka laga raaco baabuurta ee magaalada Beled Weyne waxaa laga dareemaa ciriiri iyo zaxmad sababa laxiriira dad cadaalad doon ah oo safarro u aada deegaannada dhaca galbeedka iyo Bariga Beled weyne waxaana suuq waayay maxaakimta qaanuunka wax ku xuma ee ka furan magaalada Beled Weyne.
Waxaa aad u yar Kalsoonida shacabka Soomaalidu ku qabaan maxkamadaha xarfaha iyo xeerkii Talyaaniga laga dhaxlay balse shacabku waxay ku qanacsanyihiin shareecada islaamka oo marwalba ay cdaaladda uraadsadaan.
Arrintan ah in Soomaalidu cadaalad udoonata Maxkamadaha Al Shabaab waxaa isbuucii lasoo dhaafay fadhigga Baarlamaanka ka hor qiray Boqolaal xildhibaan sidoo kale R/wasaare ku xigeenka dowladda Federaalka aya warbaahinta u xaqiijiyay.